Ikhaya » Izindaba Zamuva » Abantu » Ukuvakasha kukaCarlsbad kumemezela umphathi omkhulu omusha
Izindaba Zezinhlangano • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Industry Hospitality Industry • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • I-USA Izindaba Ezintsha
Vakashela iCarlsbad Imemezela Isikhulu Esiphezulu, uKim Sidoriak
Endimeni yakhe entsha njengoMongameli ne-CEO ye-Visit Carlsbad, uKim ubheke phambili ekuhlanganyeleni nomphakathi kanye namabhizinisi endawo ukukhuthaza kangcono indawo nokuhlanganisa i-Visit Carlsbad persona nedolobha kanye namabhizinisi ngamanye. Uhlela ukukhuphula indawo eya ezingeni likazwelonke futhi andise ukubonakala ngaphakathi kwezimakethe ezibalulekile, ngenkathi esebenzisa ucwaningo lwedatha ukwenza izinqumo ezinolwazi ngobubanzi kanye nokuhanjiswa kwenhlangano.
Inhlangano yezokumaketha yendawo yedolobha laseCarlsbad, eCalifornia iqamba i-CEO entsha.
UKim Sidoriak wayeyiChief Marketing Officer yaseSanta Monica Travel & Tourism ngaphambi kokuthi athathe izintambo zokuvakashela iCarlsbad.
Vakashela iCarlsbad ihlose ukukhuphula iCarlsbad njengenye yezindawo zokuvakasha ezingundunankulu eSouthern California.
Vakashela iCarlsbad, okuyinhlangano yezokumaketha lapho iya khona eDolobheni laseCarlsbad, isimemezele ukuqokwa kukaMongameli & i-CEO yayo entsha, uKim Sidoriak.
Ngaphambi kokujoyina ithimba le-Visit Carlsbad, uKim wayeyi-Chief Marketing Officer ye Santa Monica Ezokuvakasha nezokuVakasha lapho ayephethe amasu, amaqhinga nezinhlelo ezaziqinisa intshisekelo, ukufunwa nokuqashelwa kweSanta Monica.
Ngalesi sinyathelo, uKim uzosebenza ne- Vakashela iCarlsbad Ithimba nababambiqhaza abasemqoka ukuphakamisa iCarlsbad njengenye yezindawo zokuvakasha ezingundunankulu eSouthern California.
At Santa Monica Ezokuvakasha nezokuVakasha, iminikelo kaKim ifaka phakathi ukucubungula ubunikazi bomkhiqizo waseSanta Monica nokuqalisa uhlelo lwenhlangano lweminyaka emihlanu. Ubuye futhi abe yilungu le-Visit California Brand and Content Committee futhi wathola isitifiketi se-Certified Destination Management Executive esivela kwa-Destinations International.
Ukuthuthela eCarlsbad, kusondeza uKim emndenini kanti uKim uhlela ukuba yilungu lesikhathi eside emphakathini wendawo nasendaweni yaseSan Diego North County. “Ngijabule kakhulu ukusondela emndenini owandisiwe, futhi ngilangazelela kakhulu ukuba yilungu elikhuthele lomphakathi waseCarlsbad,” kusho uSidoriak, naye obambe iqhaza kwezokukhangisa kwezokuxhumana zeHilton Hotels Corporation kanye neSaatchi & Saatchi Advertising.
Endimeni yakhe entsha njengoMongameli ne-CEO ye Vakashela iCarlsbad, UKim ulangazelele ukubambisana nomphakathi kanye namabhizinisi endawo ukukhuthaza kangcono indawo nokuhlanganisa i-Visit Carlsbad persona nedolobha kanye namabhizinisi ngamanye. Uhlela ukukhuphula indawo eya ezingeni likazwelonke futhi andise ukubonakala ngaphakathi kwezimakethe ezibalulekile, ngenkathi esebenzisa ucwaningo lwedatha ukwenza izinqumo ezinolwazi ngobubanzi kanye nokuhanjiswa kwenhlangano.
"UKim uletha inhlanganisela ephelele yesipiliyoni, isinyathelo nobuntu ukuhola umphathi wenhlangano okuyiwa kuyo kulesi sahluko esilandelayo sokukhula," kusho uTroy Wood, uSihlalo weBhodi Yezokuvakasha eCarlsbad. "Uthando lukaKim, ukushayela kwakhe nekhono lakhe lokusebenza ukuthuthukisa idolobha kuzosiza ekukhuphuleni inhlangano nedolobha ndawonye."
UKim uthole iBachelor of Arts in Communications evela e-University of Southern California futhi intshisekelo yakhe enkulu ukuhamba umhlaba ezofunda ngamasiko ahlukene.